စိန်ကြိတ်စက်၊ CBN ကြိတ်စက်၊ CNC စက်စက်များ - Jinyunxiang
Hybrid နှောင်ကြိုးကြိတ်စက် CNC HSS tool ကို fl ...
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - ၁။ ထူးကဲသောထိခိုက်လွယ်မှု၊ အသုံးပြုရန်စဉ်အတွင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံရန်မလွယ်ကူပါ။ 3. အလုပ်အပိုင်းကိုမီးရှို့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 4. ဘီးထူးဆန်းပုံစံမျိုးစုံအပေါ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစေးနှောင်ကြိုးစိန်နှင့် CBN ဘီးပြား, ခွက်ပုံဖော်, ပန်းကန်လုံးနှင့်ဆလင်ဒါပုံသဏ္availableာန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားကပ်လျက်တည်ရှိပွန်းပဲ့ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများအပေါ်ခုတ်ချွန်, ဝင်ရိုးအစိတ်အပိုင်းများ slotting, လင်းကျောက်နှင့်ဖန်ဖြတ်တောက်, အဆုံး,fကြိတ် ...
အစေးနှောင်ကြိုးစိန်ကြိတ်ဘီးကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော tungsten carbide စက်ဝိုင်းလွှစက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ကြိတ်သည့်အစွန်းကချောမွေ့ပြီးချွန်ထက်။ သက်တမ်းရှည်သည်။ Resin bond စိန်တီးစက်ကိုရိုးရှင်းသော free abrasive lapping အစား display screen processing အတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးနှင့်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းများဖယ်ရှားမှုနှုန်းနှင့်မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုကောင်းမွန်သည်။ အစေးစိန်ကြိတ်ဘီးဖြစ်ပါတယ် ...
TCT carbide လွှင့်စက်အတွက်စိန်ကြိတ်စက် ...
အဓိကအားဖြင့် CNC စက်တွင်မျက်နှာကြိတ်ခြင်းအတွက် TCT စက်ဓါးများ၊ ကာဗိုက်လွှင့်စက်များအတွက်စိန်ကြိတ်စက်များ၊ Vollmer, Abm, Rekord ကဲ့သို့သော carbide ကိရိယာများအတွက်စိန်ကြိတ်စက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ လျှောက်လွှာအရကွဲပြားသည်။ သစ်စက်အသစ်များပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ (သစ်ခုတ်လှဲခြင်းအတွက်သစ်ခုတ်၊ အစိုင်အခဲသစ်များအတွက်သစ်ခေါက်၊ အလူမီနီယမ်အတွက်သစ်ခေါက် Special အထူးအထူးသစ်စက်များအတွက်သစ်ခုတ်) သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကောင်းစွာလက်ခံရရှိသည်။ သွားများအတွက် grounded လုပ်ရန်အပိုင်း ၃ ပိုင်းရှိပါသည်။
Carbide R အတွက်စိန်နှင့် cbn ကြိတ်စက် ...
ဗဓေလသစ်ဘွန်းစိန်ကြိတ်ဘီးကိုအသုံးပြုခြင်းစိန်စိန်ဘီးများကို tungsten carbide tools များ၊ မော်တော်ကားဖန်၊ PDC၊ PCD၊ PCBN၊ ကြွေထည်မြေထည်၊ နီလာ၊ optical ဖန်နှင့်သံလိုက်ပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ Resin bond စိန်ကြိတ်စက်တွင်သေးငယ်သည့်ကြိတ်ခွဲနိုင်စွမ်း၊ ကြိတ်ခွဲမှုနည်းပါးသောကြောင့်၊ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း၊ တစ်ဝက်ပြီးကြိတ်ခြင်း၊ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အဖိုးတန် ce processing များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် ...
သစ်သားဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ စိန်နှင့် CBN ကြိတ်ခွဲစက်များ ...
သစ်သားခုတ်ရှသူများအတွက်ဘီးများဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ matrix သည်တောင့်တင်းခိုင်မာစေရန်နှင့်ထိတ်လန့်မှုကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အာမခံပေးသည်။ တရုတ်ကြိတ်ဘီးသည်အရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဖောက်သည်များကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ အသုံးပြုမှုအရကွဲပြားသည်။ Carbide Metal အတွက်စိန်ကြိတ်ဘီး Tool Cutter Grinder စိန်ကြိတ်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကြောင့်ကြိတ်ဘီးသုံးစွဲမှုမှာနှေးကွေးသည်။ ကောင်းသော Self- ချွန်ထက်, သေးငယ်တဲ့အပူ, ကြိတ်ရန်လွယ်ကူအပူကြိတ်, ...
Shijiazhuang Jinyunxiang Technology Co. , Ltd. သည်ဗဓေလသစ်နှင့်ဘီးနှင့် CBN ကြိတ်ဘီးများကိုအထူးပြုသည်။ ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ကြိတ်စက်၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုရာနှင့်ချီသောပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပကုမ္ပဏီများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ယုံကြည်မှု၊ တိကျမှု၊ ထာ ၀ ရထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးတသမတ်တည်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကုန်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးလိုပါသည်။
စိန်ဘီးများကိုကြွေထည်မြေထည်၊ အစေး၊ သတ္တုရောစပ်ခြင်း၊
သန့်စင်သောဘွန်းကြိတ်ဘီး - မိမိကိုယ်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ပိတ်ဆို့ရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောအရောင်တင်ခြင်း။ သို့သော်နှောင်ကြိုးကြံ့ခိုင်ခြင်း၊ အသေကောင်အပေါ်စိန်မလုံလောက်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်စက်အတွက်သင့်တော်သည်။
Centerless grinding သည် OD (အပြင်ဘက်အချင်း) ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အလယ်ဗဟိုမရှိသောကြိတ်စက်ကိုအရံပစ္စည်းကြိတ်ခွဲရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အမျိုးအစား: 1A1, 6A1, 9A1 လျှောက်လွှာ: ဘိလပ်မြေကာဗိုက်အရက်ဆိုင်, Polycrystallin 1. ထုတ်ကုန်အမည်： စိန်စင်တာမရှိကြိတ်ဘီး, စိန်ကြိတ်ဘီး, Resin Diamo ...
ကြိတ်ဘီး၏အမျိုးမျိုးသော applications များ
အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းများအတွက် tungsten carbide သို့မဟုတ် HSS အလွိုင်းသံမဏိကိရိယာများစိမ်ရန်အတွက် 5-axis CNC grinders များတွင်အသုံးပြုထားသော CNC Grinder Resin bond အတွက်စိန် / CBN ဘီး၊ အရည်အသွေးမြင့်စိန်၊ အထူးနည်းပညာ။ စိန်နှင့် CBN ဘီးများ။ ထိုကဲ့သို့သောခိုင်မာစေ ...
ကြိတ်ဘီး: အရွယ်အစား: 100 * 20 * 16100 * 30 * 16 ပစ္စည်း: ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ကြိတ်ဘီးတပ်ဆင်ထားပြီးနောက် CBN သစ်ပင်လွှင့်ဓါး, ကပိုမိုမြင့်မားတိကျစွာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်စာရွက်လိပ်သည်ကြမ်းတမ်းသောအနားများ၊ အမာရွတ်များနှင့်အနက်ရောင်ဖြစ်ရပ်များမှကင်းလွတ်သည်။ အောက်ပါအတွက်ဓါးသွားထောက်ပံ့။
Multi-Blade Saw စက်များ၏လူကြိုက်များမှုဖြင့်လွှစက်၏အရည်အသွေးသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် sawing ၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ လွှစက်ကိုအသုံးပြုစဉ်အတွင်းကြိတ်ခွဲခြင်း၏အရည်အသွေးသည်လွှစက်၏အရည်အသွေးကိုထပ်မံသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏အရေးပါမှုကို Self- ထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ p မှာ ...
Carbide ကိုတူးရန်အစိမ်းရောင်ဘီး, ကြိတ်ခွဲစက်အတွက် Diamond / Cbn ရှင်းလင်းရေး Angle ကြိတ်စက်, Carbide ကိရိယာများအတွက်ကြိတ်ဘီး, သတ္တုဖြတ်တောက်ရန် Carbide Circular Saw Blade, Carbide Tools သံမဏိပြားများချဲ့ရန်အတွက် 5inch Resin ဘောင်ခတ်ထားသောဘီး, Tungsten Carbide အတွက်စိန်ကြိတ်စက်,